: at 9/26/2009 03:15:00 PM
ရွှေရတုမှတ်တမ်း said... | Sunday, September 27, 2009 8:30:00 AM
မြတ်နိုး said... | Sunday, September 27, 2009 9:30:00 AM
အေး said... | Sunday, September 27, 2009 10:09:00 AM
သူများတွေတစ် တစ် လို့နေရာလုနေကြတဲ့အထဲမှာကိုယ်လဲ ပါမလားလို့စောစော စီးစီး စာတောင်မဖတ်ရသေးဘူး လာနေရာလုတာ ခုတော့ ....သုံးကလေးနဲ့ပဲ ကျေးနပ်ပြီး ပြန်သွားပါတယ် နောက်မှလာဖတ်ပါဦးမယ် :)
စိမ်း... said... | Sunday, September 27, 2009 12:05:00 PM
thawzin said... | Sunday, September 27, 2009 4:00:00 PM
color blind ကျွန်တော်လဲဖြစ်တယ် ဗိုလ်လောင်း ဆေးစစ်တုန်းကတည်းက မှတ်ချက်ပါပြီးသားလေ ရေနဲ့ လေမရနိုင်ဘူးတဲ့ ဒါတောင် လေတပ်ကို လျောက်သေးတယ်။ ကျပါတယ်။ ဒု-ချုပ်ရှေ့မှာ လေယာဉ်နဲ့ ရဟတ်ယာဉ် လွဲပြောမိသွားလို့။ ကျွန်တော်ကတော့ မွေးရာပါထင်တာပဲ။ အရောင် သိပ်မခွဲခြားတတ်ဘူး။ ဆေးတော့ အောင်သေးတယ်။ မှတ်သားသွားပါတယ်.... ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့
အဆိပ်ခွက် said... | Sunday, September 27, 2009 4:11:00 PM
မကီ လုပ်တာ... ကိုယ့် ကို ကို တော် သံသယ ဝင်လာပြီ...
rose of sharon said... | Sunday, September 27, 2009 5:36:00 PM
မသိထားတာလေး သိလိုက်ရတယ်... ကျေးဇူးပါရှင်
ahphyulay said... | Sunday, September 27, 2009 8:24:00 PM
ဟုတ်တယ်၊မမကီရေ့ .. ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း
သူတစ်ယောက်ရှိတယ်ဗျ။တစ်ချို့ ကျတော့ 
ဆက်ဖတ်အုံးမယ်ဗျို့ ။ကျွန်တော်ကတော့ အဝေး
maylay said... | Sunday, September 27, 2009 11:06:00 PM
နည်းနည်း မူးသွားတယ် မမကိရယ်။ ၉ နဲ့ ၁၃ ၁၄ ကို နည်းနည်း ဝါးတယ်။ ကျန်တာကျ ကြည့်ရ ရှင်းတယ်။ မေလေးက မျက်မှန်တပ်ထားရတော့ အဲလိုဖြစ်ချင်နေပြီထင်တယ်။ ကျေးဇူး မမ
အေး said... | Monday, September 28, 2009 12:08:00 AM
ကြည့် ရင်းကြည့်ရင်း အမြင်တွေမူးလာပြီ........
အနီစိမ်း အရောင်ချို့ တဲ့သူ က(21) လို့ပြောမယ် ။ ကာလာဘလိုင်းလုံးဝ ဖြစ်နေသူက ဘာဂဏန်းမှ မမြင်ရပါ ။ အမှန်က (74) ပါ ဆိုတာကြီးကိုလည်း(21)လို့မြင်နေပြီ။
ဒါဆိုရင်တော့ ချို့တာတော့ချို့ပြီပေါ့ .......မူးလည်းမူးသွားပြီး......နောက်မူးချင်ရင်ကာလာဘလိုင်းဘဲလာစစ်တော့မယ်ဗျို့
ပူးတေ said... | Monday, September 28, 2009 12:21:00 AM
ကျန်တာတော့ ok တယ်။
ဒါဆို လူတိုင်းအဲဒါ ဖြစ်လားမသိနော်။
လိုရာဆွဲတွေးသွားတယ်။ ကာလာဘလိုင်း လို့ အမည် မတတ်ချင်တိုင်း :)
Khyl said... | Monday, September 28, 2009 3:16:00 AM
ဟယ်... ကိရေ... ငါဘာမှ မမြင်ရဘူး....
အော် ... မီးမှမလာတာ.... ခွိ
Khyl said... | Monday, September 28, 2009 3:19:00 AM
ညှင်းညှင်း... အားလုံးမှန်တယ်... လုံးဝ မမူးဘူး.... လေးပွ... မင်းတော်တယ်..
Nge Naing said... | Monday, September 28, 2009 5:09:00 PM
Kiki ရေ ဗဟုသုတရတယ်။ တကယ့် Professional ပဲ။ Colour blind မွေးရာပါပဲ ရှိတယ်ထင်နေတယ်။ မွေးရာပါမဟုတ်ပဲ ရှိတာ အခုမှ သိရတယ်။ ကျေးဇူးပဲ။
ဝက်ဝံလေး said... | Monday, September 28, 2009 6:11:00 PM
မကိ အကုန်မှန်တယ် ဒါပေမယ့် နံပါတ် ၁၃ မှာ ဝံလေးက ၁၃ လို့ဖြေလိုက်တယ် အဖြေမှန်က ၇၃ ဖြစ်နေတယ် အဲဒါရော ဘာကြောင့်လဲ ဟင် ဝံလေးက ကိုယ်ဖြေပြီးမှ မကိပြောတဲ့အဖြေတွေကို ကြည့်တာ အီးးးဟီးးးး အဲဒါရော ဘာလဲ ဟင် ပြောဦး ကာလာဘလိုင်းလားဟင် ဟင့် ရွှတ် နိုချင်တယ် လာပြောဦးနော် သိလားလို့
ဘိုင် တာ့တာ ဖွားကိရေ
ခြေလှမ်းသစ် said... | Monday, September 28, 2009 6:57:00 PM
ဖွားကိရေ color blind အကြောင်းလေး အသေးစိတ်ကို အခုမှ သိရတော့တယ် .... မှတ်သားသွားပါတယ်ဗျာ .. ကျေးဇူးပါနော် ...
Anonymous said... | Monday, September 28, 2009 7:27:00 PM
.I le color blind pe .RED and GREEN ma myin ya bu bya/aku ma pe thi ya taw te/ thank you par.
သုခုမလေဒီ said... | Tuesday, September 29, 2009 1:16:00 AM
အာ.......... အမူးဆေးတွေပဲတိုက်ကျွေးနေတယ်။ အိပ်တာပဲကောင်းတယ်။ စာတောင်မဖတ်နိုင်တော့ဘူးးးးး